25 Richest People ee Silicon Valley - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE The 25 Richest People ee Silicon Valley
Larry Page iyo Sergey Brin waa dadka saddexaad iyo afaraad ee ugu qanisan dooxada Silicon Valley. Getty
Dooxada Silicon Valley waxay hoy u tahay shirkado badan oo tiknoolajiyadeed - iyo bilyaneerada ugu sareeya.
Si joogta ah u dhexdhexaad ah meelaha ugu qaalisan ee lagu noolaan karo meeraha. Dalka Mareykanka Dooxada Silicon waxay ku taallaa degaanka Santa Clara waxaana ka mid ah xarunta Palo Alto oo ku salaysan xarunta Menlo Park iyo Mountain View. Tiknoolajiyada tiknoolijiyada - oo leh qaabab kala duwan at Google à Uber - ee ka shaqeeya gobolladan waa kuwa ka mid ah kuwa ugu qanisan ee suuqa .
Read more : Madaxda Tech ee San Francisco waxay bixiyaan 10 Milyan Dollar si ay u xanaaqaan marka ay shirkadahoodu yihiin dadweynaha - dhammaan noocyada barafka barafka,
25 ee ugu sareeya dadka ugu taajirsan ee ka shaqeeya Silicon Valley waxay ku saleysan yihiin xogta waqtiga-dhabta ah ee Forbes Liiska waxaa ka mid ah kooxaha bulshada sida Mark Zuckerberg, Facebook. iyo joornaalka Jack Dorsey, oo uu weheliyo aasaasaha Tesla Elon Musk. Hantidhawrka guuleysta ee guuleysta, mujtamaca hantida maguurtada ah iyo filimka halyeeyga George Lucas ayaa sidoo kale ku jira safka.
Waxaa jira khilaafka xuduudaha juqraafi ah ee 1945  ee Dooxada Silicon. Inkastoo qaar ka mid ah la dhegaysto xuduudaha Santa Clara County ujeedooyinka liiska liistadaan ayaan ku darnay milkiilayaasha shaqadoodu waxay ku saleysan tahay magaalooyinka ee Santa Clara County, oo ay ku jiraan San Jose waxayna ku sii socotaa dhinaca woqooyiga San Francisco .
Ka akhri maaliyada milkiilihii ugu badnaa ee 25 ee Silicon Valley.
Dooxada Silicon Valley ayaa muddo dheer guri u ahayd ...
Google, Tesla, Billionaires, Silicon Valley, BI Select, Arts iyo Dhaqanka, Mark Zuckerberg, Wealth  25 Richest People ee Silicon Valley
Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 9h ilaa 19h:  Isniinta ilaa Jimcaha
2019-04-05T16: 03: 14 + 02: 00
Dooxada Silicon Valley ayaa muddo dheer guri u ahayd bilowga tiknoolojiyada. Dooxada waxaa ka mid ah magaalooyinka Baay sida San Jose iyo Palo Alto.
Sida laga soo xigtay Forbes xogta dhabta ah ee billion billionaire, dadka 25 ee ugu taajirsan ee Silicon Valley waxay ka kooban yihiin aasaasayaasha teknoolajiyeyaasha si ay u noqdaan kuwo guuleysta.
Saddexda kuraas ee ugu horeeya waxaa ka mid ah aasaasayaasha Facebook, Oracle iyo Google.
Booqo BusinessInsider.com wixii sheekooyin badan.
Si joogta ah ayaa loo qiimeeyaa mid ka mid ah meelaha ugu qaalisan Maraykanka, Silicon Valley waxay ka koobantahay degaanka Santa Clara waxaana ka mid ah xarunta Palo Alto-based, Menlo Park iyo Mountain View. Tiknoolajiyada tiknoolajiyada - oo ay maamulayaasha Google-ka ku leeyihiin Uber - oo ka shaqeeya aagaggaas ayaa ka mid ah kuwa ugu taajirsan warshadaha.
More: Tifaftirayaasha Tech ee San Francisco waxay bixiyaan 10 Milyan Doolar si ay u soo ceshadaan cadho marka ganacsigooda ay u baxaan dadweynaha - waxayna ku soo baxaan sawirro baraf ah, caan ah,
Liiska dadka 25 ee ugu taajirsan ee ka shaqeeya Silicon Valley ayaa ku saleysan xogta dhabta ah ee Forbes waxaa ka mid ah kooxaha bulshada sida Mark Zuckerberg oo Facebook iyo Jack Dorsey on Twitter, oo ay weheliso aasaasaha Tesla Elon Musk. Waxa kale oo ka mid ah darajooyinka, raasamaalka, hantida maguurtada ah iyo filim caan ah George Lucas.
Waxaa jira khilaafyo ku saabsan xuduudaha juqraafiga ee Silicon Valley. Inkastoo qaar ka mid ah xudduudaha Santa Clara County, waxaynu ku darnay liisaska liiska liiska bilyaneeriyadeed ee shaqadooda ku salaysan magaalooyinka Santa Clara County, oo ay ku jiraan San Jose, iyo waqooyiga San Francisco.
Akhri faahfaahinta guud ee milkiilayaasha ugu caansan 25 ee Silicon Valley.
Dooxada Silicon Valley ayaa muddo dheer ku jirtay qalab tiknoolaji ah ...
Google, Tesla, Billionaires, Silicon Valley, BI Doorashada, Farshaxanka iyo Dhaqanka, Mark Zuckerberg, Hanti Dhaqaale
Dooxada Silicon Valley ayaa muddo dheer ku jirtay boorsooyin ay ka mid yihiin shirkadaha tiknoolajiyada. Dooxada waxaa ka mid ah magaalooyinka Baay sida San Jose iyo Palo Alto.
Akhriso mawduuca guud ee maalqabeenka ugu qanisan ee 25 ee Silicon Valley.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.businessinsider.com/richest-people-in-silicon-valley-wealth-2019-4
Celine Dion's Courage Tour: Qiimaha VIP Khasnadda